Saturday March 14, 2020 - 10:09:58 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Donald Trump ayaa iclaamiyay in xaalad degdeg ah lagusoo rogay dhammaan gobollada wadanka waxayna xaaladdan saameyn weyn ku yeelan doontaa dhaqaalaha wadanka.
Trump ayaa amar kuusiiyay guddoomiyaasha gobollada iyo wasaaradaha kala duwan ee dowladda in ay fuliyaan xaaladda degdegga ah ayna ladagaallamaan Carona Virus, wasaaradda caafimaadka ayaa dadweynaha siinaysa adeegyo caafimaad oo bilaash ah.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa shir jaraa'id ku sheegay in uu wasaaradda Maaliyadda ka dalbaday lacag dhan 50 Bilyan oo dollar si wax looga qabto faafidda Carona Virus, wuxuu aad udhaliilay qaabka ay guddiyada caafimaadka ubaarayaan dadka looga shakisanyahay Carona isagoo ku sifeeyay nidaam dib udhacsan.
Sidoo kale Mareykanka ayaa mamnuucay dhammaan maraakiibtii caalamka uga imaan jirtay ee badeecadaha ganacsi soo gelin jirtay mareykanka iyo kuwii ka baxayay, arrintan ayaa saameyn hor leh gelinaysa ganacsiga Mareykanka.
inkabadan 65 qof ayaa gudaha Mareykanka ugu dhimatay Cudurka Carona waxaana lasaadaalinayaan in cudurku ku dhax faafi doono bulsahda Mareykanka haddii aan si dhaqsi ah wax looga qaban bukaanada uu Carona soo ritay.